‘नेपाल आईडल’ मा मैले गरेको भोटमाथि शंका गर्ने अधिकार ‘अधिबक्ता’ यज्ञमणि न्यौपानेलाइ कसले दियो? « Light Nepal
‘नेपाल आईडल’ मा मैले गरेको भोटमाथि शंका गर्ने अधिकार ‘अधिबक्ता’ यज्ञमणि न्यौपानेलाइ कसले दियो?
Published On :7September, 2017 3:30 pm
सुबास शर्मा – पछिल्लो समयमा हरेकजसो नेपालीको मुखमा झुन्डिएको नाम हो ‘नेपाल आईडल।’ देशदेखि विदेशका विभिन्न ठाउँसम्म छरिएर बसेका लाखौं नेपाली माझ लोकप्रिय कार्यक्रम हो नेपाल आईडल।
भर्खरै खुलेको देशकै पहिलो एचडी च्यानलले बिश्वकै चर्चित रियालिटी सो कार्यक्रम नेपालमा भित्र्याएर नेपाली दर्शकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम देखाउने हिम्मत गर्नु ठूलै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। यो जोखिम मोलेर एपि वान च्यानलले करोडौं रकम खर्चगरि आज नेपालमा आईडलको लोगो भित्र्याएर देशका कुनाकुनामा दबेर बसेका प्रतिभालाई सबैमाझ प्रस्तुत गरिरहेको छ। हिजो कसैले नचिन्ने ती प्रतिभाहरुका आज लाखौं फ्यानहरु बनेका छन्। सिङ्गो देशले चिन्ने आईडल बनिसकेका छन्।
चाहे ती गाला राउन्ड बाटै बाहिरिएकी सुदूरपश्चिमकी सन्ध्या जोशी हुन्, चाहे काठमाडौकी केन्जल मेहर श्रेष्ठ वा पूर्वकी प्रमिला राई नै किन नहुन्। आज उनीहरूले आफ्नो प्रस्तुति मार्फत देश बिदेश तताईरहेका छन्।
आफ्नो राम्रो गायकी क्षमता हुँदाहुँदै पनि दर्शनको भोटका कारण आईडलको फाईनल राउन्डसम्म पुग्न नसकेपनि आज गायक ‘सुरज थापा’को चर्चा जताततै सुन्न,पढ्न पाईन्छ। सुजाता पान्डेलाई विभिन्न अनलाइनहरुमा अन्तर्बार्ता दिन भ्याईनभ्याई छ।
उल्सन श्रेष्ठ लगायतका नब कलाकारहरुले अहिले विभिन्न स्टेज तताईरहेका छन्। यसको एक मात्र कारण हो ‘नेपाल आईडल’को मञ्च।
आफूभित्र प्रतिभा भएर पनि आम जनमानसमा पुग्न नसकिरहेको बेलामा आज नेपाल आईडलले उनीहरुलाई साच्चिकै आईडल बनाईदिएको छ। हरेक नेपालीको मनमा बस्न सक्ने कलाकार बनाईदिएको छ। तर आज यतिधेरै नयाँ प्रतीभाहरुलाई जन्माएको नेपाल आईडलले प्रत्येक हप्ता आलोचना खेप्नुपरेको छ। खेपिरहेको छ। कहिँले तिनै साङ्गीतिक क्षेत्रमा स्थापित गायक गायिकाहरुबाट त कहिले अन्य क्षेत्रमा आबद्ध ब्यक्तिहरुबाट।
हुँदाहुदै अब त आईडल विरुद्ध मुद्दा परेर अदालतले समेत अन्तरिम आदेश समेत जारि गरिसक्यो। हाम्रो लागि यो भन्दा लाजमर्दो विषय अर्को के हुन सक्छ?
नेपाल आईडल जस्तो उच्चस्तरीय टिभी कार्यक्रम जसले छोटो समयमै पाएको दर्शकको माया र उचाईलाई अदालतसम्म पुर्‍याउने हदैसम्मको निच काम भएको छ। यो समग्र देशको लागि ज्यादै लज्जाको विषय हो।
आफू चर्चामा आउन होस् वा जुनसुकै घृणित मानसिकताले जो कसैले यस्तो कदम चालेको छ यसले नेपाली समाजलाई आज फेरि एकपल्ट अपमानित गरेको छ।
आज औंलामा गन्न सकिने केही सम्भावना बोकेका नव प्रतिभा हामीले पायौ। तर त्यो सँगै हामीले अझै हजारौ त्यस्ता प्रतिभाहरु जो संगीत सिकिरहेका छन्, जो नेपाली संगित क्षेत्रमा केही गर्न चाहन्छन्, केही बन्न चाहन्छन् उनीहरुको लागि एउटा अवसर हो नेपाल आईडलको ढोका। तर, आज यो कार्यक्रमलाई विभिन्न कोणबाट गिराउने प्रयास भइरहेको छ। । यसको गतिलो उदाहरण हो नेपाल आईडल बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने ‘अधिबक्ता’ यज्ञमणि न्यौपाने।
यज्ञमणिलाई नेपाल आईडलको अन्तर्राष्ट्रिय नियम र जनताले स्वविवेकले गरेको भोटमाथि शंका गर्ने अधिकार कसले दियो? आजसम्म उनले नेपाल आईडलका कुनकुन प्रतिस्पर्धीलाई कति भोट गरे? बताउन सक्छन् ऊनी? होईन भने, मैले मेरो इच्छाले गरेको भोटमाथि शंका गर्ने अधिकार कसले दियो उनलाई?
यदि आईडलले जजहरुलाई नो एलिमेशन पावर प्रयोग गर्न पाउने अधिकार दिएको छ भने उक्त आईडलको अधिकार र उसको आफ्नो विधानविरुद्ध बोल्ने आँट कहाँबाट आयो?
के हरेक रियालिटी सो कार्यक्रमहरु उनले पढेको कानुनको किताब अनुसारनै चल्नु पर्ने हो? होईन भने उनले बुझ्न जरुरी छ, यो आईडल कुनै गाउँ सहरमा आयोजना हुने सानातिना प्रतियोगिता होईन। यसलाई नेपालमा रहेका आईडलका सञ्चालन तथा जज कसैले पनि आफ्नो मर्जीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन पाउँदैन।
आईडलको आफ्नै नियम र कानुनमा रहेर कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी उनले कुनै अदालती मुद्दा हेर्दा कानुनको किताब पल्टाउने गर्छन् त्यसैगरी आईडलले आफ्नो कार्यक्रममा पनि कुनै निर्णय लिनुपरे वा गर्नुपरे आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय विधानमा रहेर गर्ने गर्छ। आईडलको नियम भन्दा बाहिर गएर कार्यक्रम सन्चालन गरे उसले कार्यक्रम प्रशारण गर्ने अनुमतिसमेत खारेज हुन्छ।
कार्यक्रम संचालन गर्ने स्टेज अन्तर्रास्ट्रिय स्तरको नभएमा उसले कार्यक्रम आयोजना समेत गर्न पाउदैन। सम्पूर्ण सर्तहरु पूरा गर्ने बाचा गरेर करोडौं रुपैयाँ खर्चगरी आईडलको लोगो नेपालमा भित्र्याएको हो।
यसरी नेपाल आईडलको हरेक गतिविधिलाई आफैले निगरानी गर्ने, विश्वभर सञ्चालित आइडल फ्रान्चाइजलाई मुद्दा हाल्नु कसैको प्रगतिमाथिको जलन र दरिद्र मानसिकताको पराकाष्ठा हो। FREEMANTLE MEDIA जस्तो यौटा प्रतिष्ठित कम्पनीको निगरानीमा आयोजना हुने कार्यक्रममा धाधली भयो भनेर भन्नू आफैले आफैलाई गिज्याउनु सरह हो।
साढे छ लाख नेपालीले गर्छन हरेक वर्ष लोकसेवा आयोग परीक्षाको तयारी, मन्त्री पण्डितले खोले रहस्य
पोखरा, ६ जेठ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कार्यालय समयमा ट्रेड युनियन
अघि बढ्यो नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रो निर्माण : सरकारले मेट्रो निर्माणका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र, लागत करिब दुई खर्ब
रमेश लम्साल, काठमाडौँ – सरकारले काठमाडौँको नागढुंगादेखि काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलसम्म मेट्रो रेल निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया
अस्पतालको बेडबाटै उपेन्द्र देवकोटाले भने: गरिबका छोराछोरी पढाउने अस्पताल खोलिदिनु
काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले वरिष्ठ चिकित्सक डा उपेन्द्र देवकोटाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै अभिनन्दनपत्र